Haddii aad leedahay Surface dhowaan waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho Adobe Fresco | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Fresco ayaa dhowaan u imanaya Microsoft Surface
Munaasabad Microsoft maalmo ka hor ka dhacday, shirkadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday horudhac waxa muxuu yahay Adobe Fresco oo ku yaal barta dusha sare. Taasi waa, kaliya maahan inay ku sii sugnaato iPad-ka xilligan, laakiin haddii aad leedahay Dusha sare, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato barnaamijkan weyn ee sawir qaadista AI.
Fikradda ka dambeysa Adobe Fresco ayaa ah in lagu daydo isla dareennada la ururin karo markaan burush gacanta ku qaadano oo aan qoyno nuuradda biyo-biyoodka ka dibna si fiican u dhaq. Taasi waa, waxaan abuuri karnaa isla istaroog mahad leh Sirdoonka Farsamada ee Adobe Sensei.
Fresco wuxuu awoodaa inuu bixiyo burush fiiqan oo fiiqan, nadiif ah oo la isku hagaajin karo, burushyo badan oo Photoshop ah oo isu dhigma oo la qabsan karo, sida Burushkaas "Ku Noolaada" Adobe Sensei. Dhammaanteen waxaan sugeynay inaan awoodno inaan isticmaalno fartayada shaashadda ama qalinka sida taxanaha taxanaha 'S Pen', si aan dhab ahaan gacanta ugu haysano dijitaal biyo dijitaal ah ama rinji saliid
Microsoft waxay sidoo kale nooga tagtay macluumaad kale oo xiiso leh oo ku saabsan barnaamijkeeda oogada. Malaayiin macaamiil ah ayaa u adeegsada 'Cloud Cloud' Windows iyo in ka badan kalabar dadka isticmaala buugga oogada waxay isticmaalaan CC. Adobe wuxuu si aad ah ula shaqeynayay Microsoft si uu u gaaro taabashada ugu dabiiciga ah ee qalinka oogada.
Hore ayaan u kulanay wixii ka soo baxay iyo wixii ka baxay Adobe Fresco markii laga sii daayay iPad-ka. Qalabka kaliya ee waxaad hadda marin u leedahay qalabkan dijitaalka ah iyo kan uu Adobe doonayo inuu ku wajaho ProCreate, barnaamij kale oo loogu talagalay iPad-ka oo la mid ah kan lagu garaaco barnaamijyadan sawir qaadista ah.
Hadda waan sugeynaa inaad ogaato goorta la sii deyn doono Adobe Fresco oo ku saabsan barnaamijka 'Surface platform' taasna waxay noo oggolaaneysaa inaan u dhowaanno barnaamijkaas si aan wax uga baranno Adobe Sensei, oo ah nidaamka Sirdoonka Artificial Adobe ee barnaamijyadeeda ku jira Creative Cloud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe Fresco ayaa dhowaan u imanaya Microsoft Surface
MacBooks iyo iPad Pros waxay isticmaali karaan bandhigyo yaryar oo LED ah sanadka 2020
Adobe wuxuu kula talinayaa dadka isticmaala inaysan kor ugu qaadin macOS Catalina wali